Pizza Hut dia niverina tamin'ny fakany niaraka tamin'ny sary famantarana izay efa am-polony taona | Famoronana an-tserasera
Pizza Hut dia mamerina ny sary famantarana ny tafo mena malaza
Manuel Ramirez | | Inspiration, Logos
Tsy nikasika ny sary famantarana azy i Pizza Hut hatramin'ny 2014 Ka izao ianao dia nanapa-kevitra ny hiverina any amin'ny faka misy amin'ity sary famantarana mena ity. Logo iray izay namboarina tamin'ny taona 60 ary miverina amin'ny herin'ny fahiny toy ny hoe tsy nisy fotoana lasa.
Ny mieritreritra an'io sary masina io miaraka amin'ny taranaka mifandimby afaka nijanona tamin'ny iray amin'ireo pizza-ny Ity dia teboka tena mahaliana momba ireo fikasana vaovao ao amin'ny Pizza Hut ireo. Tsy vao sambany izahay nahita marika tsara niverina tamin'ny sary famantarana hatramin'ny taona lasa.
Raha miresaka momba ity logo ity isika dia ny quintessence an'i Pizza Hut nandritra ny am-polony taona maro, azontsika atao ny mahatakatra ny lanjan'izany amin'ny marika. Fomba iray hiverenana amin'ny fakanao izany mba hamerenanao ilay nahatonga anao halaza be.
Na dia amin'ity pizza ity aza, ny zava-dehibe, hoy ny doka iray, dia ao anaty koba. Ity logo ity dia nampiasaina teo anelanelan'ny 1967 sy 1999 ary manolotra izany fahatsapana tsy fahanterana izany rehefa mandeha ny fotoana. Ity dia ao anaty horonan-tsary ahitantsika ny kinova velona an'ity logo Pizza anthological Pizza Hut ity.
Ary, koa, azontsika atao ny mandinika izay mandeha amin'ny sary famantarana rehefa tsy te-hihantona be isika: endrika tsotra, loko mamirapiratra ary hafatra mazava be izay afaka mahatratra ny karazana mpanjifa rehetra izay mety mandalo amin'ireo trano fisakafoanana malaza.
Nanome i Pizza Hut a fiovana lehibe tamin'ny 2014 rehefa nitondra an'io logo vaovao io izay tena tsy mitovy amin'ilay taloha. Toy ny hoe pizza ny endriny, tsy manadino ny mena, dia toa te hiverina amin'ny toerany i Pizza Hut hanao marika iray ary hamerina amin'ny laoniny ny mombamomba azy.
Mampiseho izany koa indraindray manery logo vaovao ho an'ny fotoana vaovao afaka hahatratra ny vokany mifanohitra amin'izany. Noho izany dia azo takarina izany hetsika niverina tamin'ny taona lasa ho an'ny marika mifandraika amin'ny pizza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Pizza Hut dia mamerina ny sary famantarana ny tafo mena malaza
Ireo mpanakanto Japoney dia manome endrika sary an-tsaina ireo firenena sy ny sainam-panahin'izy ireo ho endri-tsoratra anime
Mamorona fisehoan-javatra azo tanterahina ao anatin'ny minitra vitsivitsy miaraka amin'ny fampiharana Internet Photocreator